267s Samaynta 9aad qarnigii 9aad ee Ciraaq lagu beddelo images and subtitles
Waxaan ahay Andrew Hazelden waxaanan dheryasameyn jiray muddo ka badan 30 sano. Waxaan u maleynayaa midka xiisaha leh ee taariikhda galay waxay ahayd inay iyagu abuurayaan dahab wixii aan dahab ahayn waxaana loo maleyn jiray inay yihiin kuwa xoolo dhaqatada ah. Waxaad dareentaa inaad lumin karto adoo fiirinaya cufnaanta dheri macaan taas oo kaa dhigaysa inaad ku fakarto inaad ku jirto adduunyo kale. Qalabka tusaha ahi waa farsamada meesha aad ku isticmaasho sulphides bir ah si loo abuuro dusha sare ee dheri dusha dheriga. Waa farsamo aad u khiyaano badan oo adag. Baaquli waa koobi weelkii 9aad ee Ciraaq. Xaqiiqdii waxaan u isticmaalay samaynta weelkan dhoobo laga keenay Talyaani kana soo jeeda Deruta taas oo ah midab buff. Marka waxaan qaadaa kubbadda dhoobo waa in ka badan hal kiilogaraam culeys waxaana lagu tuuray giringiraha waxayna qaadan kartaa shan daqiiqo in lagu tuuro qaabka. Waxaa uga haray laba maalmood in la helo maqaar adag. Mar haddii ay maqaar adag tahay waa la leexiyay oo cagta ayaa la leexiyay. Mar alla markii cagta la jeedsado foornada waa in lagu qallajiyaa gabi ahaan qoraxda wixii intaa ka dambeeyayna waxay leedahay gantaalkeedii ugu horreeyay oo ah dubeelka buskudka ka dibna waa la qaataa oo lagu dhex shubaa glaze cad taas oo aasaaska u ah waxa loo yaqaan 'iron oxide' si looga dhigo mid cad ka dibna waa la eryay mar labaad. Habka xigta waa in lagu rinjiyeeyo midabka timaha jilicsan. Midabka aan u adeegsanayo inaan ku dhajiyo baastadaani waxaa inta badan laga sameeyaa naxaas sulphide laakiin sidoo kale waxay ku leedahay xoogaa lacag ah waxaana sidoo kale lagu samayn doonaa dibi cas iyo dhoobada. Kadibna waa la xakameynayaa sidaa darteed waxaa loo tuuraa ilaa heerkulka dhalaalaya - 650 centigrade. Ka dib markii la dilaa waa la qaadaa waana la tuuraa ka dibna lagu qasay khal taas oo ah marka la rinjiyeeyo. Naqshadeynta dhibic ayaa laga soo qaatay qarnigii 9aad ee ciraaq. Xaqiiqdii sida loo shaqeeyo waxa burushka ay adeegsadeen burush la mid ah. Rasaasta rasaasta ahi waxay u baahan tahay weel leh awood u leh yareynta oksijiinta waxaad isku deyeysaa inaad abuurto jawi aan oksijiin jirin taas oo yaraynaysa midabaynta si loo soo bixiyo lacagta iyo naxaasta. Qiiq ayaad abuurtaa Qaabka aan u sameeyo taasi waa in gabal yar oo qoryo ah lagu dhex dilo foornada dhexdeeda iyada oo loo sii marayo godka basaasnimada taasina waxay soo saartaa oksijiinta. Markaa waxaad u oggolaaneysaa ogsijiinka in muddo ah muddo gaaban si uu u nadiifiyo qolka iyo in qashin-qubka iyo yaraynta uumiga ay muhiim u tahay in la abuuro furitaanka dheriga. Markuu dherigu ka soo baxo jiqda yar weli waxay umuuqataa inay tahay dhoobo uun ku daboolay dhoobo markaa waa inaad ku tirtiraa ocher adigoo wata baabiin. Markaa waad ogaan kartaa bal in xabbadda qaraxyadu shaqeysey iyo in kale maxaa yeelay haddii ay shaqeysay waxaad bilaabi doontaa inaad aragto casaan cadaan ah ama lacag ah. Markaa waa qaybta ugu sixirka badan waa xoqidda dheryaha ka dib rasaasta Weligaa ma hubtid waxa dhici doona natiijooyinkana lama saadaalin karo laakiin waa cufnaanta bilowga waxay umuuqataa inay leedahay nolol ay iyadu leedahay. Waa inaad mararka qaarkood dheriga ku garaacdaa dhinaca iftiinka si aad u aragtid mugga sidaa daraadeed waxay kuxirantahay xagasha aad dhejisid dheriga waxay kuxirantahay inay waad aragtaa carada dhegaha ama ma. Marka waxay umuuqataa inay tahay wax aan muuqan oo wax dhacaya
Samaynta 9aad qarnigii 9aad ee Ciraaq lagu beddelo
< start="7.76" dur="5.24"> Waxaan ahay Andrew Hazelden waxaanan dheryasameyn jiray muddo ka badan 30 sano. >
< start="13" dur="3.96"> Waxaan u maleynayaa midka xiisaha leh ee taariikhda galay >
< start="16.96" dur="2.42"> waxay ahayd inay iyagu abuurayaan dahab >
< start="19.38" dur="2.2"> wixii aan dahab ahayn >
< start="21.58" dur="2.8"> waxaana loo maleyn jiray inay yihiin kuwa xoolo dhaqatada ah. >
< start="24.38" dur="1.92"> Waxaad dareentaa inaad lumin karto >
< start="26.3" dur="2.96"> adoo fiirinaya cufnaanta dheri macaan >
< start="29.26" dur="5.4"> taas oo kaa dhigaysa inaad ku fakarto inaad ku jirto adduunyo kale. >
< start="34.66" dur="5.28"> Qalabka tusaha ahi waa farsamada meesha aad ku isticmaasho sulphides bir ah >
< start="39.94" dur="4.8"> si loo abuuro dusha sare ee dheri dusha dheriga. >
< start="44.74" dur="4.06"> Waa farsamo aad u khiyaano badan oo adag. >
< start="48.8" dur="6.14"> Baaquli waa koobi weelkii 9aad ee Ciraaq. >
< start="54.94" dur="7.92"> Xaqiiqdii waxaan u isticmaalay samaynta weelkan dhoobo laga keenay Talyaani kana soo jeeda Deruta >
< start="62.86" dur="4.8"> taas oo ah midab buff. >
< start="67.66" dur="1.46"> Marka waxaan qaadaa kubbadda dhoobo waa >
< start="69.12" dur="4.48"> in ka badan hal kiilogaraam culeys waxaana lagu tuuray giringiraha >
< start="73.6" dur="7.2"> waxayna qaadan kartaa shan daqiiqo in lagu tuuro qaabka. >
< start="80.8" dur="4.58"> Waxaa uga haray laba maalmood in la helo maqaar adag. >
< start="85.38" dur="4.33"> Mar haddii ay maqaar adag tahay waa la leexiyay oo cagta ayaa la leexiyay. >
< start="89.71" dur="5.77"> Mar alla markii cagta la jeedsado foornada waa in lagu qallajiyaa gabi ahaan qoraxda >
< start="95.48" dur="5.12"> wixii intaa ka dambeeyayna waxay leedahay gantaalkeedii ugu horreeyay oo ah dubeelka buskudka >
< start="100.6" dur="4.54"> ka dibna waa la qaataa oo lagu dhex shubaa glaze cad >
< start="105.14" dur="3.689"> taas oo aasaaska u ah waxa loo yaqaan 'iron oxide' si looga dhigo mid cad >
< start="108.829" dur="3.651"> ka dibna waa la eryay mar labaad. >
< start="112.48" dur="4.16"> Habka xigta waa in lagu rinjiyeeyo midabka timaha jilicsan. >
< start="116.64" dur="7.26"> Midabka aan u adeegsanayo inaan ku dhajiyo baastadaani waxaa inta badan laga sameeyaa naxaas sulphide >
< start="123.9" dur="4.46"> laakiin sidoo kale waxay ku leedahay xoogaa lacag ah >
< start="128.36" dur="4.86"> waxaana sidoo kale lagu samayn doonaa dibi cas iyo dhoobada. >
< start="133.22" dur="6.96"> Kadibna waa la xakameynayaa sidaa darteed waxaa loo tuuraa ilaa heerkulka dhalaalaya - 650 centigrade. >
< start="140.18" dur="3"> Ka dib markii la dilaa waa la qaadaa waana la tuuraa >
< start="143.18" dur="6.72"> ka dibna lagu qasay khal taas oo ah marka la rinjiyeeyo. >
< start="150.12" dur="6.06"> Naqshadeynta dhibic ayaa laga soo qaatay qarnigii 9aad ee ciraaq. >
< start="156.18" dur="4.6"> Xaqiiqdii sida loo shaqeeyo waxa burushka ay adeegsadeen burush la mid ah. >
< start="160.78" dur="6.15"> Rasaasta rasaasta ahi waxay u baahan tahay weel leh awood u leh yareynta oksijiinta >
< start="166.93" dur="3.59"> waxaad isku deyeysaa inaad abuurto jawi aan oksijiin jirin >
< start="170.52" dur="5.68"> taas oo yaraynaysa midabaynta si loo soo bixiyo lacagta iyo naxaasta. >
< start="176.2" dur="1.46"> Qiiq ayaad abuurtaa >
< start="177.66" dur="6.96"> Qaabka aan u sameeyo taasi waa in gabal yar oo qoryo ah lagu dhex dilo foornada dhexdeeda iyada oo loo sii marayo godka basaasnimada >
< start="184.62" dur="2.84"> taasina waxay soo saartaa oksijiinta. >
< start="187.46" dur="4.68"> Markaa waxaad u oggolaaneysaa ogsijiinka in muddo ah muddo gaaban si uu u nadiifiyo qolka >
< start="192.14" dur="9.069"> iyo in qashin-qubka iyo yaraynta uumiga ay muhiim u tahay in la abuuro furitaanka dheriga. >
< start="201.5" dur="5.129"> Markuu dherigu ka soo baxo jiqda yar weli waxay umuuqataa inay tahay dhoobo uun >
< start="206.629" dur="2.351"> ku daboolay dhoobo >
< start="208.98" dur="8.82"> markaa waa inaad ku tirtiraa ocher adigoo wata baabiin. >
< start="217.8" dur="5.4"> Markaa waad ogaan kartaa bal in xabbadda qaraxyadu shaqeysey iyo in kale >
< start="223.2" dur="4.4"> maxaa yeelay haddii ay shaqeysay waxaad bilaabi doontaa inaad aragto casaan cadaan ah ama lacag ah. >
< start="227.6" dur="5.43"> Markaa waa qaybta ugu sixirka badan waa xoqidda dheryaha ka dib rasaasta >
< start="233.03" dur="5.51"> Weligaa ma hubtid waxa dhici doona natiijooyinkana lama saadaalin karo >
< start="238.54" dur="5.6"> laakiin waa cufnaanta bilowga waxay umuuqataa inay leedahay nolol ay iyadu leedahay. >
< start="244.18" dur="7.1"> Waa inaad mararka qaarkood dheriga ku garaacdaa dhinaca iftiinka si aad u aragtid mugga >
< start="251.28" dur="2.819"> sidaa daraadeed waxay kuxirantahay xagasha aad dhejisid dheriga waxay kuxirantahay inay >
< start="254.099" dur="2.421"> waad aragtaa carada dhegaha ama ma. >
< start="256.52" dur="7.42"> Marka waxay umuuqataa inay tahay wax aan muuqan oo wax dhacaya >